दृष्टिविहीन समाजमा मेरो भूमिका | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
दृष्टिविहीन समाजमा मेरो भूमिका
२०७५ श्रावण १४, सोमबार ०९:३८ गते
काठमाडौँबाट परीक्षा सकिएर बिदा मनाउनेक्रममा धेरैपछि घर गएको थिएँ म । मनमा छुट्टै किसिमको रौनक थियो । नहोस् पनि कसरी ? आखिर तीन महिनापछि गएको थिए । मन निकै हर्षित र आनन्दित थियो । असारको महिना गाउँघरको परिवेश नै छुट्टै थियो । अझ जताततै हरियाली वातावरण असारे गीत घन्किँदा र अरुले हिलो खेलेका दृश्यहरुले मलाई पनि खेलुझैँ लाग्न थालेको थियो । बुवाआमा काममै ब्यस्त भैराख्नुहुन्थ्यो । म भने विश्वकप फुटबलको माहोलमा ब्यस्त थिए । जतिबेला पनि हातमा रिमोट लिएर टिभी अगाडि नै हुन्थेँ । ममी कराउनु हुन्थ्यो– यसलाई यो फुटबलले बिगार्ने भयो । म मुसुमुसु हाँस्थेँ । यसरी रमाइलो हुँदै थियो मेरो घरको बसाइँ । सधैँजसो बेलुकाको समयमा घरको कुकुर डुलाएर फर्किने गर्थें म । साँझ यसो गर्नु छुट्टै आनन्द लाग्थ्यो । र, साँझपखको शीतलमा घुम्ने मज्जा पनि बेग्लै ।
यसरी म साँझमा वरिपरि हिँड्दै थिएँ । यत्तिकैमा घरनजिक छिमेकी घरमा दाजु–भाउजू विवाद गरिराख्नुभएको रहेछ । के रहेछ भनेर म त्यहाँ पुगिहालेँ । एकछिन त दुवै जना चुपचाप लाग्नुभयो । केही असहजजस्तो महसुस गर्नुभएछ क्यारे । के भयो र ? भनेर मैले नै सोधिहालेँ । भाउजूले आफूलाई रोक्नै सक्नुभएन सायद, रोक्न कोसिस गर्नुभएको थियो होला । उहाँको आँखामा त्यो कुरा प्रष्ट देखिन्थ्यो । म सहजै अनुमान लगाउन सक्थेँ । उहाँ भन्न थाल्नुभयो– ‘तपाईंको दाइ धेरै जिद्दी हुनुहुन्छ, न त कुरा मान्नुहुन्छ, न केही बुझ्न नै तयार हुनुहुन्छ ।’
फेरि मैले सोधेँ– आखिर कुराचाहिँ के हो ? भाउजू दाइतिर हेर्दै रुँदै भन्नुभयो– ‘छोरी धेरै भयो रे । यो सबैको जिम्मेवारी मेरो रे । तीनवटा भयो रे । अब पनि छोरी नै हुन्छ रे । तेरै कारणले भन्नुहुन्छ अनि गाली गर्नुहुन्छ । यो कुरामा म के नै गर्न सक्छु र ? भन्नू त बाबु, मेरो वशको कुरा पनि होइन, भाग्य नै यस्तो !’ उहाँ बर्बर्ती आँसु खसाल्न थाल्नुभयो । मैले भनेँ, ‘यस कुरामा कसैको दोष हुँदैन र छैन पनि । न दाइको, न भाउजूको ।’ र, जुन कुरा जानीजानी गरिएको हँुदैन । त्यस्तो कुरामा झगडा गरेर पनि हुन्छ र ? यो समयमा आएर पनि हामी अझ अबुझ बनिदिने हो भने अहिले हुर्किंदै गइरहेका नानीहरूको भविष्य के होला ? यो वातावरणमा आफूलाई कस्तो महसुस गर्लान् उनीहरूले ? छोरी नै सृष्टि होइनन् र ? उनीहरूबिना न त हाम्रो अस्तित्व छ, न त हुनेछ । छोरीहरू पनि ठूलठूला आविष्कार र चुनौतीपूर्ण काम गरेका छन् । हरेक क्षेत्रमा छोरी भनेर पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । यदि उनीहरूलाई छोरासमान शिक्षा र वातावरण दियौँ भने । छोराछोरीलाई हामीले नै फरक व्यवहार गर्छौं, अनि फरक देख्छौँ, वास्तवमै त्यस्तो छैन ।
अझ आजको समयमा यस्तो कुरा तपाईंलाई भनिरहनुपर्दा म आफैँलाई पनि रमाइलो लागिरहेको छैन । यस्तो सुन्नुपर्दा भित्रभित्रै साहै्र खल्लो लागिरहेको छ । र, साँच्चै भन्नुपर्दा, छोरी हुनुमा दोष त कसैको होइन । खासमा यो गल्ती पनि त होइन । यो वाक्य नै आफैँमा गलत छ । दाइलाई सम्झाउने क्रममा भनेँ मैले । अझ यो त तपाईंमा भएको एक्सवाई क्रोमोजमको परिणाम हो । महिलामा त एक्सएक्स एकै किसिमको मात्र क्रोमोजम हुन्छ । यस्तो कुरामा झगडा गर्नु त सिर्फ एउटा लज्जास्पद विषयमात्र हो भन्छु मचाहिँ । भाउजू एकटकले कुरा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो । धेरै नै हिम्मत मिल्यो होला । उहाँका आँखामा आँसु पनि ओभाएकाजस्ता देखिन्थे । उहाँलाई पनि गह्रौँ मन हलुका भएको थियो होला । दाइतिर हेर्दै कुरा बुझ्नुभयो त बल्ल भन्नुभयो । दाइ पनि आत्मग्लानि महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म अझ यस्तो अँध्यारोमा रहेछु भन्दै पछुताउनुभयो ।
मेरा तीन छोरी नै मेरा छोरा हुन् । उनीहरूलाई पनि छोरासरह सक्षम हुने अवसर मैले नै दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । ‘मैले नबुझेर हो कि अथवा बुझ्नै खोजिनँ । के भयो, के अबदेखि यस्तो व्यवहार कहिल्यै गर्दिनँ’– भन्नुभयो । उहाँका कुराले म निकै खुशी भएँ । अब ती नानीहरूले पनि नयाँ जीवन पाउँछन् । मेरो प्रयास सार्थक भयो । आफैँलाई गौरव महसुस गरेँ मैले । खुसी यस कुरामा पनि लाग्यो । अब भाउजूले पनि गाली खेप्नुपर्दैन सधैँजसो । आनन्द लाग्यो मलाई । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाज जहाँको तहीँ देख्दा दुःख लागेर आयो मलाई ।
मुखले जतिसुकै चर्को भाषण गरे पनि व्यवहारमा सोचेजसरी परिवर्तन गर्न सकिएको छैन अझै पनि । हाम्रो शिक्षामा मात्रै होइन, दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउन सके पक्कै पनि समाज बदलिँदो हो । महिला अझै पनि भेद्भावको शिकार बन्नुपरेको छ । हाम्रै समाजमा, हाम्रै घरमा पनि । तपाईंको दिदीबहिनी, भाउजू, आमा यसरी नै दिनदिनै प्रत्यक्ष÷ अप्रत्यक्ष रुपमा कहीँ न कतै, समाजले अझ पनि कमजोर बनाइरहेको छ । सोच परिवर्तन नगर्ने हो भने कसै गरे पनि हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदैन । र, होस भनेर आशा राख्नु पनि बेकामको हुनेछ । समाज परिवर्तनको लागि सबैको सोच परिवर्तन हुनुपर्नेछ । परिवर्तनको लागि सबैको लगनशीलताको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।